လင်းဇော်ထိုက်: November 2011
ရွေးချယ်ထားသည့် နေရာများတွင် တပ်ဆင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုဆော.လဲသိ.ချင်ရင်...အဲ.မှာသွားကြည်.ပါလား
Posted by linnzawhtike at 11/29/20110comments
ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးတံတား Millau Viaduct
Millau Viaduct ဆိုတာဟာ ပဲရစ်မြို့နဲ့ ဘာစီလိုနာမြို့ကို ဆက်သွယ်ထားတဲ့ E11 expressway အသစ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ် ။ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးတံတားထဲမှာလည်း တစ်စင်းအပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ် ။ တံတား အရှည်က ၂၄၀ မီတာ ရှိပြီး အမြင့်ကတော့ အံ့သြဖွယ်ရာ ၃၃၆ မီတာတောင်ရှိပါတယ် ။ လေ့လာထားတဲ့ စစ်တမ်းများအရတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး တံတား ဖြစ်ပါတယ် ။
ဂျာမဏီနိုင်ငံမှ ကားပါကင်ထိုးတဲ့ စနစ်အကြောင်းကို ပြသထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။
ပထမဆုံး Air con တပ်ထားတဲ့ ဒူဘိုင်းမြို့မှ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ် ။
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ဖန်သားချည်းပဲ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ပင်လယ်ရေအောက် စားသောက်ဆိုင်
ဒီစားသောက်ဆိုင်ကို Hilton Maldives Resort & Spa မှာ ဧပရယ် ၁၅ ရက်နေ့က ဖန်သားချည်း ပဲပြုလုပ်ထားတဲ့ ပင်လယ်ရေအောက်စားသောက်ဆိုင်ကို ဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့ပါတယ် ။ အိန္ဒိယပင်လယ်ရဲ့ ရေအောက်အနက် ငါးမီတာ မှာ တည်ဆောက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။ အဆောက်အအုံကို ပင်လယ်ရေမှော် တွေနဲ့ ၀န်းရံထားပြီး ညစာစားသောက်မယ်ဆိုရင် ရေအောက်မြင်ကွင်းတွေကို ၂၇၀ ဒီဂရီ ကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Hilton Maldices Resort & Spa မှ General Manager Carsten Schieck ကတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ မယ်ဒိုက်ဗ် ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က ပင်လယ်ရေအောက်မြင်ကွင်းတွေနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် စားသောက်ရအောင် ပင်လယ်ရေအောက်နည်း ပညာတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် လို့ ဆိုပါတယ် ။ ဆက်လက်ပြီး သူက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဧည့်သည်တွေဟာ မယ်ဒိုက်ဗ်ပင်လယ်ရေအောက်ကမ္ဘာရဲ့ အရောင် ကြည်လင်သန့်စင်မှု နဲ့ အလှအပကို မှတ်ချက်ပေးနိုင်ပြီး ဒါဟာ ဧည့်သည်တွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ခြေထောက်တွေကို မစိုရပဲ ပင်လယ်ရေအောက်မြင်ကွင်းစုံကို ကြည့်ရှုပြီး ပျော်ရွှင်နိုင်ပါတယ် လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ။
MJ Murphy Ltd မှ တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ဒီဇိုင်ကတော့ New Zealand မှ Ithaa's distinctive feature ကို ယူသုံးထားပါတယ် ။ Acrylic နံရံတွေက ဖောက်ထွင်းမြင်ရပြီး အမိုးကိုလည်း မြင်ရပါတယ် ။ ကြမ်းခင်းကလွဲလို့ အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးကို ကြည်လင်တဲ့ Acrylic နဲ့ ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ Coral garden တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နေပြီး ငါးမန်းတွေ အရောင်အသွေးစုံတဲ့ငါးတွေ ထူးခြားတဲ့ မြင်ကွင်းအဖုံဖုံနဲ့ ဧည့်သည်တွေကို ဆွဲဆောင်ဖို့ ကြိုစားနေပါတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ် ။
ကမ္ဘာ့ အမြန်ဆုံးဓါတ်လှေကားကို ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး အဆောင်အအုံမှာ တပ်ဆင်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။Toshiba အမျိုးအစား ဓါတ်လှေကား ဖြစ်ပြီး တည်ဆောက်ရေး အဖွဲ့က ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး အဆောက်အအုံဖြစ်တဲ့ Taipei 101 မှာ ဒီအမြန်ဆုံး ဓါတ်လှေကားကို တပ်ဆင်ခဲ့တယ်လို့ ကြေငြာခဲ့ပါတယ် ။ ဓါတ်လှေကားဟာ အမြင့်ဆုံးအရှိန် တစ်မိနစ်မှာ ၁၀၁၀ မီတာ နဲ့ မောင်းနှင်နိုင်ပြီး အပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့ တစ်မိနစ်ကို ၆၀၀ မီတာ အရှိန်နှုန်းနဲ့ တက်နိုင်ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ အလုပ်လုပ်မှုနှုန်းက တစ်နာရီကို ၆၀.၆ ကီလို မီတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဓါတ်လှေကားဟာ ၅ လွှာမြောက်ကနေပြီး ၈၉ လွှာ မြောက်ကို ၃၉ စက္ကန့်နဲ့ တက်နိုင်ပါတယ် ။ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ နည်းပညာတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ် ။
World's first pressure control system - ဒီကောင်က လေထုဖိအားကို suction and discharge blowers နည်းပညာနဲ့ ထိမ်းညှိပေးတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
Posted by linnzawhtike at 11/28/20110comments
ထူးဆန်းသော လိပ်လိုလို ....ဘာလိုလို လိပ်လို့တော့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းတာပဲ ။
Posted by linnzawhtike at 11/27/20110comments
ဆင်ဟွာ သတင်းဌာနမှ တင်ပြထားတဲ့ ဖမ်းဆီးရမိသမျှ ငါးကြီးတွေကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။ ဒီလို သတ္တ၀ါအ ကြီးကြီးတွေကို တွေ့ရခြင်းဖြင့် သူမသိသူမသိ ဒေသတွေ လူအရောက်အပေါက်နည်းတဲ့ဒေသတွေမှာလည်း ကြီးချင်တိုင်းကြီးထွားနေတဲ့ သတ္တ၀ါကြီးတွေ ဘယ်လောက်များများ ရှိနေမှာပါလိမ့် ။
မြွေအရည်ခွံနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ကားတွေဖြစ်ပါတယ် ။ သတ္တ၀ါတွေရဲ့ အရည်ခွံနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ လူ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုမှ နှစ်သက်သူများအတွက်တော့ အကြိုက်တွေ့မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။ သာမန်အမျိုးတူကားထက် ဈေးနှုန်း ၃ ဆမြင့်ပြီး အထူးအော်ဒါမှာမှသာ သီးသန့်ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။
အကယ်၍ သင်ဟာ ဖုန်းသရဲ တစ်ဦး ဆိုရင်တော့ ဒီဖုန်းကိုကြိုက်နှစ်သက်မိမှာ အမှန်ပါပဲ ။ Australia မှာနေတဲ့ Peter Aloisson က ဒီအိုင်ဖုန်းကို ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။ အကျိုးဆက်ကတော့ အိုင်ဖုန်း ဘုရင်မ (ကမ္ဘာပေါ်မှာ တန်ဖိုးအကြီးမားဆုံး ) ဖြစ်သွားပါတယ် ။ စိန်အလုံးပေါင်း ၁၃၈ လုံးကို အသုံးပြုထားပြီး အဲဒီစိန်တွေကို Princess cut လို့လည်း ခေါ်ပါတယ် ။ စိန်အလေးချိန်ပေါင်း ၁၇.၇၅ ကာရတ်ရှိပြီး ရွှေဖြူပေါင်း 18 kနဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ် ။တန်ဖိုးက ဒေါ်လာ ၁၇၆ ၄၀၀ ဖြစ်ပါတယ် ။ Brilian cut diamonds တွေချည်းပဲ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဖုန်းကတော့ ဒေါ်လာ ၆၆၁၅၀ ကျပါတယ် ။
နိုဝင်ဘာလ (၈) ရက်မှ (၁၁) ရက်နေ့အထိ လမ်းမတော် ၁၃ လ...
၁၉၈၉ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဧရာဝတီတ...
ထိုင်းရေဘေးမှ ရေဘေးသင့်သူများ၏ စိတ်ကူးဆန်းသော သယ်ယ...
မလိုလားအပ်သည့် ညစ်ညမ်းပုံများနှင့် ကြမ်းတမ်း ဗွီဒီ...
တရုတ်နိုင်ငံမှ သဲထိတ်ရင်ဖိုမှန်ပြားခင်းတောင် ပတ်လေ...
အသက်အရွယ်အလိုက် စားသင့်သော အစားအစာများ
နိုင်ငံတကာမှ မြို့ကျက်သရေဆောင် ထူးထူးခြားခြားရုပ်ထ...
USB ကို Password နဲ့ ပိတ်ဖို့ဆော့ဖ်ဝဲ – USB Manager
Folder Icon တွင် မိမိရဲ့ ဓါတ်ပုံလေးနဲ့ အစားထိုးချင...
Laptop တစ်လုံးကို ဘယ်လို ရွေးချယ် ၀ယ်ယူမလဲ
Laptop အကြောင်း သိကောင်းစရာများ
iPhone 4S Siri App ဘယ်လို အလုပ်လုပ်လဲ....?
window xp လျို့ ဝှက်ချက်များ
လမ်းဘေးဂီတပွဲ – နီကိုရဲ
ချစ်သူဘ၀ နဲ့ အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ ကွားခြားချက် ....